प्रवास | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
न्यूयोर्क । न्यूयोर्कमा मात्रै करीब २ सय र न्यूजर्सी शहरमा २० जना जति नेपालीहरुलाई कोरोना भाइरस हुन् सक्ने आशंका स्थानीय सामाजिक संघ संस्थाहरुको अनुमान गरेका छन् । जस अनुसार न्यूयोर्कको एउटा अस्पतालमा ११ जना, अर्कोमा १२ जना र अर्कोमा…
स्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको सिड्‌नीमा रहेका ४ नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । उनीहरु अहिले आफ्नै घरमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बसिरहेका छन । संक्रमित सबै युवती रहेको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
सिड्‌नीको ग्रान्भिलमा एउटै कोठामा गरेर बसिरहेका…
न्युयोर्कमा ज्यान गुमाएका लिम्बुका छोरा पनि सिकिस्त, अमेरीकामा रहेका नेपालीहरुमा संक्रमण तिव्र
न्युयोर्क । गएराती न्युयोर्कको एल्महस्र्ट अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका अनिल लिम्बुका छोरा पनि सिकिस्त भएका छन् । २२ बर्षका जेठा छोरा सिकिस्त बिरामी भएपछि आजै एम्बुलेन्स आएर एल्महस्र्ट अस्पतालमा लगेको छ । उनलाई दिउसोदेखि अस्पतालमा भर्ना गरिएको…
राष्ट्रपति ट्रम्प: ‘लासहरु कुनामा थुपारेर रेष्टुरेन्ट जाऊ, नयां घर किन भन्न कठिन छ’
लुइभेल, केन्टकी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलवार अचानक अमेरिकाको ‘डुवेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न’ भन्दै दुइ सातामा नै अमेरिकालाई खुल्ला गर्न चाहेको वताए । ट्रम्पको चाहनामा अविश्वास गरौ, उनी सर्वशक्तिमान राष्ट्रका राष्ट्रपति हुन्, विश्वास गरौं, कुनै पनि सुचकले राष्ट्रपतिको चाहना…
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिकाको न्युयोर्कमा ५० वर्षीय लिम्बुको मृत्यु
न्युयोर्क । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा ५० वर्षीय नेपाली अनिल लिम्बुको मृत्यु भएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका महासचिव मुनेन्द्र नेम्बाङले जानकारी दिए ।
पाँचथरको रानीगाउँका अनिल १५ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका थिए…
श्रीमान ठग्ने श्रीमती र श्रीमती ठग्ने श्रीमानहरूका नाममा !
भनिन्छ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाँग्रा हुन । त्यसलाई अझ गढिलो ढङ्गले हेर्ने हो भने र गहिराइ बुझ्ने हो भने श्रीमान् र श्रीमती एक अर्काका परिपूरक हुन भन्ने बुझ्नु वाञ्छनीय छ । रथका दुई पाँग्रा मध्ये एक…
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एन आर एन)का केन्द्रिय अध्यक्ष्य कुमार पन्तलाई एन आर एनको जन्मस्थल बेलायतमा कालो झण्डा देखाइएको छ।
एनआरएनए यूकेको १५ औ स्थापना दिवसको विवास्पद कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा सहभागी हुन आएका एनआरएनए अध्यक्ष पन्तलाई बेलायतमा पहिलो पटक…
काठमाडौं । चीनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण कोरिया पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । त्यहाँका विभिन्न शहरमा तीब्ररुपमा कोरोना प्रभावित बिरामी देखिन थालेपछि कोरियामा रहेका नेपालीहरुमा पनि त्रास बढेको छ । कोरियाका अधिकांश मुख्य शहरमा नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरु…
डिभोर्स गर्ने मान्छे खोज्दै, बोक्दै, र हाईलाईट गर्दै हिडने पत्रकार !
खाम, दाम र स्त्रीलिङ्ग खोज्दै र बोक्दै हिडने पत्रकार !!
दारु र भारु भए पुग्ने बुद्धिजिबी, लेखक, साहित्यकार !
नेताका बेडरुममै पुगेर पद हत्याउने महान कलाकार !!
न्याय निशाफ नदिने न्यायालय र…
अबुधाबी । आबुधाबीमा बिहीबार भएको सवारी दुर्घटना ३ नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । सोही दुर्घटनामा १४ नेपाली घाइते भएका छन् ।
एमबीएम कम्पनीमा कार्यरत उनीहरु काममा जाँदै गर्दा अल रहा भन्ने स्थानमा बिहीबार बिहान ५ः३० बजे दुर्घटनामा परेका…